Nchịkọta Youtube dị ebe a | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 1, 2011 Wednesday, February 22, 2017 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị banyebeghị, Youtube emelitere nyocha ya ngwugwu nye ihe ohuru, juputara na agba nchịkọta ngwugwu.
Lee ụfọdụ atụmatụ kachasị ọhụrụ na Nchịkọta Youtube:
Peeji mara nma.
Nkwupụta miri emi nke na-agụnye njikọ aka dị ka atụpụtara site na mmasị, ihe ndị na-adịghị amasị ya, okwu na ọkacha mmasị agbakwunyere ma ọ bụ wepu.
Vidio ndị kachasị elu na-ebugharị ọtụtụ echiche na ndenye aha.
Ọhụụ njigide ndị na-ege ntị na-egosi etu esi ele vidio ndị na-ekiri gị na-anọ.
Youtube weputara nke a Ozi nchịkọta Youtube na nkọwa nke mgbanwe:
N'ebe a na Martech, anyị ahụla mmụba dị elu na vidiyo na vidiyo anyị yana okporo ụzọ sitere na vidiyo anyị laghachi na saịtị anyị. Ọ bụ ya mere anyị ji mepee a Ngwaọrụ Sidebar Youtube anyị onwe anyị ebuli vidiyo Youtube anyị maka nchọta.
N'ezie, anyị na-ahụ ọtụtụ traction na vidiyo nke na anyị nwere ike ịbawanye mmepụta anyị na vidiyo kwa izu ebe a n'oge na-adịghị anya yana onye na-akwado vidiyo na-akwado ọrụ! Okwu anyị na vidiyo bụ na ha adịla ole ma ole na ole na etiti. Anyị na-atụ anya ịmepụta vidiyo ndị ọzọ nwere nnukwu ọdịnaya na-agakarị. Anyị ga-eme ka ị biputere.
Ọhụrụ a nchịkọta Ihe ngwugwu gha enyere ndi mmadu aka ichota ihe ndi n’eme ka ndi mmadu tinye aka!
Tags: AnalyticsVidio Ahịanchịkọta vidiyoyoutubenyocha youtubenchịkọta vidiyo vidiyo youtube
10 Atụmatụ Facebook maka ndị ahịa B2B